Jeneral Katumba Wamala, ayaa Safar Deg Deg Ah Waxa uu Kusoo Gaaray Magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
aliyaha guud ee Ciidamada Dalka Uganda Jeneral Katumba Wamala, ayaa shalay safar deg deg ah waxa uu kusoo gaaray Magaalada Muqdisho ,maalin kadib markii dagaalyahano katirsan Al-Shabaab weerar qasaaro badan ku qaadeen saldhig ciidamada Uganda ku lahaayeen Degmada Janaale.
Jeneraal Katumba Wamala, ayaa kulan la qaadan doono saraakiisha Ciidamada AMISOM ee ku sugan Magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa kasocda Dalka Uganda, waxa ayna kawada hadli doonaan marxaladaha ay ku sugan yihiin ciidankooda.
Sidoo kale JeeraalKan ayaa qiimeyn ku sameyn doona qasaaraha ciidankooda kasoo gaaray weerarkii maalin kahor Al-Shabaab ku qaadeen Saldhig ay Ciidamada Uganda ee qeybta ka ah AMISOM ku lahaayeen Deegaanka Janaale.
Wali lama xaqiijin in taliyaha ciidamada Dalka Uganda ee loo yaqaan UPDF in uu tagi doono Gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan Degmada Janaale uu ka dhacay weerar qasaaro aad u badan uu kasoo gaaray Ciidamada Uganda.
In ka badan 50-askari oo katirsan Ciidamada AMISOM ayaa la rumeesan yahay in ay ku dhinteen weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen Degmada Janaale, waxaa sidoo kale jira askar katirsan Ciidanka AMISOM oo wali la la yahay nolol iyo geeri.